Aaway Kuraastii iyo Bakooradihii ay isla dhici jireen xubnaha Baarlamaanka Soomaaliyeed?!!(Sawiro) - Wargeyska Faafiye
Home 2014 November 12 .Warka Aaway Kuraastii iyo Bakooradihii ay isla dhici jireen xubnaha Baarlamaanka Soomaaliyeed?!!(Sawiro)
Aaway Kuraastii iyo Bakooradihii ay isla dhici jireen xubnaha Baarlamaanka Soomaaliyeed?!!(Sawiro)
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliyeed ayaa xiliyadii hore waxaa looga bartay marka ay is qilaafaan ama is fahmi waayaan inay isla dhacaan wax alaale iyo wixii ka ag dhaw ama ay gacanta ku hayaan balse arinka ayaa iminka noqday mid ka badalan ficilkaas .
Xarunta golaha Baarlamaanka Soomaaliyeed ee (Golaha Shacabka ) ayaa Kuraasta iminka dhex taal waxay tahay mid ku rakiban dhulka waliba uusan qofna fujin karin. Sidoo kale Xildhibaanada ayaa Bakooradaha , Hubka IWM ah waxaa looga soo qaadaa irida hore ee xarunta Baarlamaanka .
Xarunta golaha Shacabka oo dhawaan si casri ah loo dhisay waxaa sidoo kale inta badan gidaarada ku rakiban kaamerooyin taas oo soo bandhigeeysay xildhibaada is qilaafsanaa oo kooda ugu qeeylada badnaa uu ku hubeeysnaa kaliyah Firimbi iyo Waraaqo ay mararka qaar tuuryeenayeen (Nabad Time) !!
Ciidanka Puntland oo qabtay Markab Hub u Rarnaa Alshabaab.
Xukuumadda Soomaaliya oo bilawday qaadista isbaarooyinka sharci darada ah ee duleedka Muqdisho.